Thursday June 07, 2018 - 09:14:34 in Wararka by Super Admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxay dil shalay ka dhacay mid kamida xaafadaha degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho.
Sawirka Ex. Xildhibaan Xuseen Geedi Jimcaale
ciidamo katirsan Xarakada Al Shabaab ayaa saacadihii la soo dhaafay khaarijiyey xildhibaan horay uga tirsanaa Baarlamaanka dowladda Federaalka ridada Soomaaliya, ka dib howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen degmada howlwadaag.
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Al Shabaab ayay ku sheegatay mas'uuliyadda dilkan "Saraakiil ka tirsan mujaahidiinta ayaa Idaacadda Islaamiga Andalus u sheegay in howlgal qorsheysan oo ay fuliyeen ciidamada Mujaahidiinta lagu dilay Xuseen Geedi Jimcaale oo ahaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa golaha dhawaaghiida, iyagoona sheegay in mujaahidiinta fuliyey howlgalka aysan la kulmin wax iska caabin ah" ayaa lagu yiri warka Al Shabaab kasoo baxay.
Weerarka lagu khaarijiyey Xuseen geedi ayaa ka dhacay meel u dhow hooygiisa oo ku yaalla xaafadda Cali Shire ee degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho sida ay xaqiijiyeenSaraakiisha Al Shabaab.
Warar xog ogaal ah oo ay heshay warbaahinta ayaa tilmaamaya in ninkan uu sidoo kale ka mid ahaa ergadii soo xushay xildhibaannada golaha Baarlamaanka DF-ka ee laga soo doortay waxa loogu yeero Galmudug.
Wuxuu sidoo kale ku lug lahaa abaabulka maleeshiyaat loo qorayey maamulka Ashahaada la dirirka ee isku magacaabay Galmudug, waxaana uu abaabulay ugu yaraan 60 askari oo loo tababarayo maamulkaasi.
Weerarkan lagu khaarijiyey sarkaalkan ayaa qeyb ka ah howlgallada qorsheysan ee lagu saraakiisha dowladda Federaalka Soomaaliya, waxaana uu ku soo aadayaa xilli ay sii kordheenweerarada ka socda degmooyinka gobolka Banaadir